‘सेन्टी भाइरस’ लाई माया गर्ने दर्शकप्रति आभारी छु' : सिताराम कट्टेल 'धुर्मुस' (भिडियोसहित) | Kendrabindu Nepal Online News
११ फाल्गुन २०७६, आईतवार १७:१२
फागुन ९ गते (महाशिवरात्रि)का दिनबाट देशभर प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’ले राम्रो व्यापार गरिरहेको छ । सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुन्जना घिमिरे (सुन्तली) को सुबिहानी फिल्मसको प्रस्तुती चलचित्र हो ‘सेन्टी भाइरस’ । यस चलचित्रबाट आम्दानी भएको अधिकांश हिस्सा जनस्तरबाट निर्माण भईरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि सहयोग गरिने निर्माणपक्षले बताइसकेको छ । बजारमा चलचित्रको बारेमा केही टिका टिप्पणीहरु पनि आइरहेको छ । यसै चलचित्रको बारेमा चलचित्रका मुख्य पात्र साथै धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल (धुर्मुस)सँग केन्द्रबिन्दुकी संवाददाता सृजना राईले ५ प्रश्न गरेकी छिन्ः
१. ‘सेन्टी भाइरस’ तपाईंले सोचे अनुरुप चलेको जस्तो लाग्छ ?
मैले सोचे भन्दा पनि धेरै राम्रो दर्शकहरुको उपस्थिती रहेको छ । हामी जहाँ जहाँ पुग्यौं एकदमै राम्रो प्रतिक्रियाहरु पनि आइरहेको छ । म एकदमै आभारी छु दर्शकहरुप्रति ।
२. सेन्टी भाइरसलाई लिएर बजारमा एक खालको आलोचना हुन थालेको छ, यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
स्वाभाविक हो, टिका टिप्पणी हुनु । व्यस्तताका कारण मैले पूर्ण रुपमा चलचित्रलाई समय दिन पाइन । तर यो चलचित्र एउटा अभियानसँगै मनोरञ्जनसँग जोडिएको हुँदा सबैलाई मेरो अनुरोध छ, आउनुहोस् यस अभियानमा तपाईंहरु पनि सामेल हुनुहोस् ।
३. चलचित्रले तीन दिनसम्म कति आम्दानी गर्‍यो, तपाईंको अपेक्षित आम्दानी कति हो?
हिजोसम्म २ करोड ४७ लाख छ । अब आज पनि राम्रै छ, हलहरु सबै हाउसफुल नै छ । हाम्रो चाहाना राम्रै होस् भन्ने हो । जसले गर्दा रंगशाला निर्माणलाई टेवा मिलोस् ।
४. चलचित्रको स्टोरीले दर्शकहरु तानिएको हो या सहयोगका लागी ?
दुवै हो, दर्शकहरुको कलाकारप्रतिको माया हो । मैले सुरुबाटै भन्दै आएको थिएँ । यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो । साथै यो चलचित्रलाई एउटा अभियानसँगै देशको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको छ । त्यसैले दर्शकहरु यो अभियानका लागी हाम्रो पनि योगदान होस्, हामी पनि सहभागी हुनुपर्छ भनेर आइरहेका छन् ।
५. तर, चलचित्र समीक्षकहरुले चलचित्रको समीक्षामा राम्रो भनेका छैनन् नी ?
आआफ्नो विचार हुन्छ । ज–जस्ले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु भयो म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । यस्तो प्रतिक्रियाले मलाई झन थप उर्जा मिल्छ । आफूलाई निखार्ने अवसर हो । मैले पनि धेरैको समीक्षा पढें, कतिले कथा नै समावेश गर्नुभएको छ । सायद सन्दर्भले नछोएको हुन सक्छ । तर मलाई लाग्छ नेपाली चलचित्र बजारमा लागेको लामो खडेरीलाई यस चलचित्रले केही हदसम्म भए पनि सान्त्वना प्रदान गरेको छ । हेरौं भिडियोमा :
५ प्रश्न, sitaram kattel
Prevमिस ब्युटी अफ चितवनको ताज कृति चौधरीलाई
साढे दुई वर्ष यताकै उच्च विन्दुमा नेप्सेNext